I-Private Oceanside Beach Retreat - Khipha futhi Uphumule
Iqhugwane ibungazwe ngu-Claudia
Indawo enhle yolwandle ehlala phezu kolwandle lwasePacific. Khipha futhi unethezeke ku-palapa yethu yomoya evulekile ngokubuka okungaphazamiseki kolwandle oluvulekile olubanzi nogu oluluhlaza oluhlaza.
Lokhu ukuphela kwendlela yokubaleka ngaphandle kwegridi, enezinsiza ezanele zasekhaya (ifriji, amanzi ashisayo ahambayo, amandla elanga) ukuze uzizwe ukhululekile futhi usekhaya.
Sitholakala ihora eningizimu yePuerto Vallarta ekuthuthukisweni kwe-Los Chonchos eco okuyiqembu lama-palapa angaba ngu-20 asabalele phakathi kwamagquma asehlathini namabhishi amabili esihlabathi. Izisebenzi zesikhathi esigcwele (abakhuluma isiNgisi) bakhona ukuze bakwamukele uma ufika futhi bakusize nganoma yini oyidingayo.
I-Los Chonchos ayinayo imigwaqo futhi ifinyelelwa kangcono ngetekisi yamanzi ehamba kabili ngosuku ukusuka e-Boca de Tomatlan etholakala imizuzu engu-30 eningizimu ye-Puerto Vallarta. Uhambo lwemizuzu engama-40 ngesikebhe luyingqopha-mlando yohambo njengoba wehla ngogu olumangalisayo lwe-Pacific, ume emadolobheni amaningana asogwini oluhle, okuhlanganisa ne-Yelapa. Idolobhana eliseduze laseChimo linemigwaqo nezimoto kodwa liwuhambo lwama-45 ogwini.
Le palapa evumelana nemvelo isebenzisa amandla elanga amalambu nesiqandisi futhi inezindawo zokushaja amafoni namalaptop. Sinamanzi ampompi aphuma esiphethwini esisezintabeni, kanye nekhishi le-propane ne-heater yamanzi okugeza ashisayo. Izivakashi eziningi ziyakwazi ukuthola i-inthanethi ngesevisi yeselula kodwa ingase ingathembeki kuye ngosuku nomhlinzeki wakho wesevisi ngakho kuhle ukuhlela “ukungaxhunywanga”.
I-palapa ilala ngokunethezeka okune (i-king bed plus loft) kanti amaqembu amakhulu angakwazi ukuhlaliswa uma osofa nemibhede yasemini kusetshenziswa.
Ikhishi ligcwele izitsha, izibuko kanye nezitsha. Indawo yokudlela enetafula/izihlalo eziqoshwe ngesandla ezinezihlalo ezine noma ngaphezulu. Igumbi lokugezela eligcwele elineshawa eshisayo, usinki, indlu yangasese eshaywayo.
Yini ongayenza e- Chonchos? Akukho lutho noma konke kuye ngokuthi imizwa yakho! Ukuhamba nge-kayaking, ukudoba, ukushisa ilanga kwelinye lamabhishi amabili, ukubhukuda, i-snorkeling, i-boogie boarding, ukuhamba ngezinyawo, ukubuka imikhomo, ukubuka izinyoni, uhambo losuku oluya e-Yelapa noma e-Chimo .... noma nje uthathe isihlwathi ku-hammock!
I-Los Chonchos ngempela isipiliyoni "esingekho kugridi". Asikho isitolo ngakho-ke uzofuna ukuyolanda igrosa nempahla kusenesikhathi ePuerto Vallarta.
IChimo iyidolobhana elincane, imizuzu engu-45 ukuhamba ngezinyawo wehla ngasogwini, lapho ungathola khona ukudla okuyisisekelo, ubhiya, ne-tequila. Kwenza uhambo oluhle lwesigamu sosuku njengoba kunezindawo zokudlela ezimbili ezinhle eziphakela abahambi, ezinikeza ukudla kwasolwandle okusanda kubanjwa nobhiya obandayo beqhwa. Ku-palapa uzothola imenyu yendawo yokudlela yaseSunset etholakala eChimo. Yindawo ekahle yokuthola isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa, uthathe ukudla kwasolwandle okulungiselelwe ngaphambilini/okungalungisiwe, noma ushayele ucingo "ukulethwa" nge-WhatsAp.
Itekisi lamanzi lisuka e-Boca de Tomatlan ngo-9:30am nango-3:00pm. Izivakashi eziningi zichitha ubusuku e-Puerto Vallarta ngaphambi kanye/noma ngemva kohambo lwazo kuye ngesikhathi sazo sendiza.
I-Los Chonchos iyindawo ekhetheke kakhulu kodwa ingase ingalungi kubo bonke abahambi. Azikho izikhungo zezokwelapha esizeni. Alikho futhi idokodo lesikebhe ngakho-ke itekisi yamanzi "izinyawo ezimanzi" zokwehliswa/zokulandwa okungenzeka kube nzima kulabo abanezinkinga zokuhamba. Lapho ulwandle lugubha kakhulu, itekisi ayikwazi ukwehla ngokuphepha e- Chonchos. Uma kunjalo, izihambeli zizokwehliswa e-Chimo (isigodi esincane sokudoba esingamamayela angu-1.5 eningizimu ye- Chonchos) lapho abasebenzi bazosiza iqembu lakho nomthwalo wakho ku-palapa.
Ucezu lwethu oluncane lwepharadesi luyitshe eliyigugu elifihliwe lalabo abafuna ukuphunyuka abangenakulibaleka ngempela. Sibheke ngabomvu ukwabelana nawe!